China krisimasi bhero uye chishongo fekitori uye vagadziri | Kingtai
Iwo maKisimusi Anoshongedza dhizaini yakasarudzika yemwenje yekuratidzira kune yega uye yega chivakwa chatino shongedza, tsvaga kuti tingaite sei kuti yako Kisimusi ipenye nesitayera uye kirasi.
Iyo yeKisimusi Yekushongedza inoratidzira yakasarudzika mwenje inoratidzira kune yega uye yega chivakwa icho isu chatinoshongedza, tsvaga kuti tingaite sei kuti yako Kisimusi ipenye nesita uye kirasi.
Uchifunga nezve masitayera ega ega uye nharaunda dzenzvimbo imwe neimwe Unogona kuvheneka imba yako kubva kumusoro kusvika pasi nesarudzo dzinonaka mune yedenga-mitsara makwiza, makwenzi, makwenzi nemiti, nzira dzekupinda uye masuo, masango nemiti ine potted zvese zviripo.
iyo inoratidza rudo rudo kuverenga.
Unogona kuunza mashiripiti eKisimusi mukati memba mako futi, nezvakanaka zveKisimusi miti yekushongedza chiri chingori kutanga kwekushongedza kwedu kwemukati. Masuwo uye mabhanhire anogona kuve ese akashongedzwa neyedu bhero uye maruva, uye wadii kuwedzera kumwe kupoterera kwakatenderedza masokisi gore rino nenzvimbo dzemoto maruva uye fesitori yezvirongwa zviripo.
Usatombo kunetseka nezve kunetsekana kwekusimudza uye kuputsa kushongedzwa. Zvisinei kuti unoroja kana kutenga kubva kwatiri, mufaro wedu kukuitira basa rose kuitira kuti ugare pasi uye unakirwe nemashiripiti eKisimusi achiiswa pamwe chete pamberi pemeso ako.
Izvi Chigadzirwa cheKisimusi chinogona kuva yakagadzirwa ne zinc chiwanikwa, nendarira, Simbi isina ngura, pewter, aruminiyamu, mapurasitiki uye zvinogadzirwa kuburikidza nesimbi yakanyungudutswa. Iyo simbi inopisa mvura, inodururwa muforoma, uye inogadzirwa nekutenderera-kukanda.
Pashure: Bookmark uye mutongi
Bhero reKisimusi uye zvishongo